Qalabka tijaabada ah ee kaneecada ah ee loo yaqaan "Acetate" (1045-69-8) hplc = 98% | AASraw
Koodhka tijaabada ah ee loo yaqaan "acetate"
/ Products / Anterolics steroids / Taxanaha budada ah ee testosterone / Testosterone budada Acetate
SKU: 1045-69-8. Categories: Taxanaha budada ah ee testosterone, Anterolics steroids
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaam qiyaaseed oo ah budada Testosterone Acetate (1045-69-8), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Testosterone Cajiibka 'Acetate' video
I. Baaritaanka Root Testosterone Acetate budada BAstaamaha:
Name: Testosterone Dufanka Acetate
Formula kelli: C22H30O4
Miisaankani waa: 358.4712
Dhibcaha Biyaha: 228-230 ° C
Testosterone Acetate wareega budada
Magacyada Kimikalka: Testosterone budada Acetate, budada tijaabada ah (CAS 1045-69-8)
Isticmaal tijaabo ah Acetate Acetate Use
Isku-baadhista Astetate Acetate waa steroid stemoid ah oo leh saameyn anabolic. Daaweynaha intiisa badani wuxuu si dhakhso ah u daaweynayaa daaweynta jirka. Baaritaan Astaamaha "Acetate" waxay khatar aad u yar u tahay sii-haynta biyaha. Shakhsiyaadka ka faa'iideysta foomkan testosterone waxay sidoo kale sheeganayaan in ay tahay arin uxun ah nooca ugu xanuunsan ee Testosterone.
Testosterone Acetate ester oogeeye waa feejignaan aad u dhakhso badan, sidaas darteedna wuxuu u baahan yahay jadwal badan oo soo noqnoqon leh si loo ilaaliyo heerarka dhiigga sida ugu macquulsan. Faa'iidada arrintani waxay tahay, in steroid laga saaro jirka si dhakhso ah ka dib marka isticmaalka la joojiyo, sidaas awgeedna ka dhigaysa xulasho dheeraad ah oo loogu talagalay cayaaraha la baaray. Ciyaartu waxay isticmaashaa tijaabo-nuuc oo ah 'testosterone' Pure Acetate si aad u aragto faa'iido weyn ee muruqa iyo xoogga muruqyada, iyo weliba dareenka guud ee fiicnaanta iyo kordhiya libido iyo jinsiga.
Waa maxay qiyaasta Testosterone Acetate budada
Testosterone Pharmaceutical Acetate (CAS 1045-69-8) waa Androgen, oo badanaa loo isticmaalo jidh-dhiska jidhka, jidh ahaan ilaalinta iyo kor u qaadida horumarinta maskaxda iyo xubnaha galmada.
Ragga, xaddiga lagu taliyey 250 - 1000 toddobaadkii, laguma talinayo haweenka isticmaala. Wareeggu wuxuu socon karaa Isbuucyada 8-12. Qiyaasahaas ayaa ku filan si loo gaaro natiijooyin heer sare ah, xooga korodhka iyo kobaca.
Haddii aad ku jirto gambale iyo nus imtixaanka sida jirdhis tartiib tartiib ah, waxaad marwalba maraysaa heerar dhiig oo aad u sarreeya. Laakiin dabcan, taasi ma ahan mid caafimaad leh. Wixii khibrad caafimaad leh, heerar hoose ayaa la doortaa. Wareeg yar oo amaan ah waxay yeelan doontaa maadooyinka 4-500 ee toddobaadkii. Qiyaasta HRT ee baaritaanka waxay ku hoos qoran tahay toddobaadkii. Maskaxda ku hay, waxaad ku jirtaa HRT sanadka oo dhan, waana taas sababta aad shoul u joogtid ama ka hooseyso 250. Budada baarista budada waxay ku siinaysaa waqti gaaban marka aad u baahato.
Sidee baa loo tijaabiyaa Iskuulada Acetate Acetate
Testosterone Budada Acetate waa maaddada lipid steroid ah. Testosterone Pure Acetate waxay u shaqeysaa adoo badalaya testosterone in jirka uu maqan yahay. Testosterone Daawada kiniinka Acetate waa in la isticmaalaa oo keliya haddii la'aanta testosterone la xaqiijiyey calaamadaha iyo baaritaanka dhiigga. Astosterone waa hormoonka labka ah, oo loo aqoonsan yahay asrogen ama wakiil metabolic endocrine, waxayna mas'uul ka tahay horumarinta sifooyinka galmada ee ragga oo ay ku jiraan horumarinta iyo dayactirka xubnaha taranka, koritaanka timaha wajiga, horumarka murqaha, iyo sifooyin kale. Qoritaanka rijeetada, waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo arimaha haweenka, oo ay ku jiraan heerarka testosterone ee hooseeya (hypogonadism). Testosterone Dufanka Acetate waa hal nooc oo loo yaqaan 'ester'. Noocyo badan oo testosterone ah ayaa laga heli karaa suuqa maanta. Qaar waxay ka xoog badan yihiin kuwa kale, sida Testosterone acetate budada. Isku-baadhista Astetate Acetate waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee daaweynta heerarka hoose ee testosterone ama hypogonadism ee ragga ragga ah. Cudurrada ayaa sidoo kale loo isticmaalo jirka jirka si loo xoojiyo muruqyada.
Testosterone Pharmaceutical Acetate (CAS 1045-69-8) waxay leedahay sumcadda mid ka mid ah noocyada ugu xooggan ee xoogga ah ee duritaanka steroid.
Qaar ka mid ah noocyada steroid ee laysku duro ayaa keena daawooyinka 100 mg per milliliter. Waxaa soo saarey Gen Sys Biotechnology, calaamadda lafteeda ayaa sheegaysa in kiimikada ay tahay baaritaan kaliya.
Dufanka testosterone acetate waxay soo bandhigaysaa caqabad ku ah dadka sameeya. Guud ahaan, dhererka dhererka ayaa aad ugu dhow inuu jiri doono PIP. Our Acetate waa si u dulqaadan / xanuun la'aan. Faa'iido kale ayaa ah xaddiga cadaynta ee Esterkan waxaa loogu talagalay cayaaraha la baaray. Qoraal muhiim ah oo la qaado ayaa ah in baaritaanka testosterone acetate uu sidoo kale ka dhaqso badan yahay kuwa kale ee soosaaraya sidaas darteed waa inaad qaadataa taxaddar haddii aad isku dayeyso inaad maamusho saameynta daawada estrogen. 100mg of Acetate waa xoogaa xoogan ka dibna Enanthate sidaas ka mid ah SERM ama aromaticase anti-aroosase leh oo la socota budada ace ah.
Wax qarsoodi ah maaha in cilladuhu ay aad u jecel yihiin kuwa jidhka sameeya, iyada oo aan la qorin ama aan la qorin. Sidoo kale waa in la ogaadaa in inkastoo cirbadaha steroid ay caan ku yihiin kuwa jir-dhiseyaasha ee muruqyada guulaha iyo xoojinta ujeedooyinka, natiijooyinka noocan oo kale ah waxay u muuqdaan kuwo si tartiib ah u lumaya marka daroogada la joojiyo. Xalalka qaarkood waxay gaaban yihiin marka loo eego kala badh nolosha dadka kale. Testosterone Acetate budada badhkeed waxay soo saari kartaa korodh dhaqso ah heerarka la riixo, hase yeeshee waxyaabahani waxay xirxiraan hal maalin ilaa laba maalmood.
Sidoo kale waa in la ogaadaa in inkastoo duritaanada steroid ay ka faa'iideystaan ​​murqaha siyaadada ah iyo xoojinta ujeedooyinka jir-dhiseyaasha, natiijooyinka waxay u muuqdaan kuwo baaba'aya marka daroogada la joojiyo. Xalalka qaarkood waxay gaaban yihiin marka loo eego hab nololeedka hababka kale. Nolosha nuska ah ee Baarista Acetate Testosterone Acetate waxay si dhaqso ah u kordhin kartaa, laakiin dhibaatooyinkani waxay baabi'i doonaan maalmo 1-2. Sidii ugu wanaagsan ee aad u baahan tahay.
Testosterone acetate Powder (CAS 1045-69-8)
Soodhaweynta baakidhka asetate acetate
Daawada kore ee testosterone acetate ma leedahay saameyn kasta
Tijaabinta istiraatiijiga ah ee loo yaqaan 'testosterone acetate powder' ayaa leh sumadda midka ugu xoogan ee xoogga ah ee duritaanka steroid ah. Socodka loo yaqaan 'powdertate cycle' ayaa laga yaabaa in uu soo saaro tiro ka mid ah saameynaha aan la filaynin sida xoqidda xiniinyaha, timo luminta, luminta, madax xanuun, walwal, iyo Qaar ka mid ah, dareenka niyadjabka. Waa hoormoon awood leh oo saameyn kara caafimaadka jidhka, maskaxda, iyo dareenka iyo caafimaadka. Sidaa daraadeed, waa in la ixtiraamo oo loo adeegsadaa si taxadar leh. Daawada kore ee loo yaqaan 'testosterone acetate' ayaa markii ugu horreysay lagu sharraxay tobanaan sano ka hor, markii markii hore la sameynaayo cudurka isrogida. Isticmaalkan steroidka ah ayaa si dhakhso ah uga fogaaday farsamooyinka bukaan-socodka si dhakhso ah, iyo laga yaabe sabab wanaagsan. Waxaa lagu beddelay wakiilada ay ahaayeen kuwo raaxo leh, oo gaabis ah, oo lahaa baraf badan oo saliideed ah, waxay ahaayeen kuwo aad u xoogan waxayna bixiyeen karti badan oo daaweyn ah. Marka la soo koobo, baarista testosterone acetate waxay "u shaqeyneysaa" sida daawooyinka kale ee testosterone sababtoo ah waxay bixisaa testosterone. Hase yeeshe, dhammaantood, maahan wax la rabo haddii aadan rabin daaweyn degdeg ah oo macquul ah oo sababi karta daroogo.
Acetate waa dhererka ugu yar ee loo isticmaali karo sameynta tijaabo-qaadis la isku duro. Marka la kala tago, buuggan karboksilic-gaaban-gaaban wuxuu noqon karaa mid aad u xanuujinaya unugyada goobta daawada cirbadeynta - aad u xanuun badan xaaladaha qaarkood. Qalabka acetate wuxuu sidoo kale yareynayaa sii deynta kalkaaliyaha testosterone oo kaliya. Farmasokokinetikkoodu maaha wax walba oo ka fiican xanibaadaha testosterone tooska ah, taas oo sidoo kale u dhacda inay dad badani xanuun dareemaan.
Dadku intooda badan kama warhayaan tallaabooyinka loo qaaday si loo helo dawo laysku duro oo nadiif ah kaas oo gabi ahaanba ka madax bannaan sunta iyo birta. Qaar badan oo ka mid ah hormoonada suuqyada suuqa madow ayaa si fiican u baaray walxaha sunta ah waxaana lagu ogaaday in ay hoos u dhaceen ama aysan ku jirin wax daawo ah oo liiska ku qoran. Daawooyinka loo isticmaalo suuq madow sida caadiga ah laguma sameeyo sharciyada farmashiyaha waxayna ka maqan yihiin talaabooyin muhiim ah oo loo baahan yahay si loo hubiyo badbaadada bukaanka. Dhakhaatiirta Defy Medical waxay si shakhsi ahaan ah u baari karaan farmashiyo kasta oo loo isticmaalo in lagu qoro hormoonnada laysku duro iyo nafaqooyinka. Waxaa muhiim ah in la xaqiijiyo in nidaamyo gaar ah la raaco iyo in koox kasta oo daawooyinka la soo saaro si madaxbanaan loo tijaabiyo si loo xaqiijiyo awoodda, sugnaanshaha, iyo maqnaanshaha sunta-sunta. Haddii aad go'aansato inaad isticmaasho ilalka wadada ee testosterone si loo xoojiyo muruqyada, ugu yaraan wax baro naftaada si aad u hubiso in aad kordhisid waxtarradaada oo aad yareeyso waxyeelada. Waxaa jira waxyaabo badan oo wareer iyo marin-habaabin ah oo ku saabsan testosterone iyo dhiirigeliyeyaal ballan-qaad ah oo ku saabsan internetka. Sidoo kale, ragga qaar ayaa u maleynaya in qiyaasta sare ay tahay, ka sii fiican. Kuwa kale waxay iska indho-tirayaan halista ah in la xiro wax-soo-saarkooda jirkooda ama aysan garanaynin sida loo maareeyo saameynaha.
Isticmaalida qiyaasta saxda ah: Ragga oo bilaaba testosterone waxay u baahan yihiin in ay yeeshaan heerarka dhiigga ee testosterone in ay dib u eegaan laba toddobaad ama hal bil kadib marka ay bilaabaan daaweynta (iyadoo ku xiran habka baaritaanka testosterone), ka hor intaysan maamulin qiyaasta u dhiganta maalintaas ama toddobaadka. Tani waa arrin aad muhiim u ah sababtoo ah natiijooyinkaas waa muhiim in la go'aamiyo haddii qiyaasta daawadaadu sax tahay.
III. Dhiig karkarin tijaabo ah kiniiniga acetate HNMR
Sida loo soo iibsado tijaabada kiniinka testosterone acetate (CAS 1045-69-8) laga bilaabo AASraw
Nandrolone Decanoate (DECA) budada
Tamoxifen Citrate (Nolvadex) budada